Fikarohana momba ny firaisana Matthew McConaughey ho Reincarnation Wild Bill Hickok-Showmen ao anatin'ny roa fiainana: Fifandraisana, Interstellar Travel, UFO's and ET's - Reincarnation Research
Bill Hickok Wild: Tsaoka sy mpisehatra
"Bill Wild" Hickok dia iray amin'ireo olo-malaza voalohany tany Amerika. Nobeazina tao Illinois tao amin'ny toeram-piompiana iray izy, saingy nahasarika azy tamin'ny zava-nitranga natolotry ny West West. Nifindra tany amin'ny faritanin'i Kansas sy Nebraska izy, tamin'ny faha-18 taonany, izay lasa mpanao lalàna. Hickok dia voarohirohy tamin'ny tifitra maro, saingy nanitatra ny isan'ny lehilahy novonoiny, izay nanampy tamin'ny famoronana angano manodidina azy.
George Ward Nichols no mpanao gazety namorona ny tantaran'ny Wild Bill. Nanadihady an'i Hickok i Nichols, izay nilaza tamina lainga fa namono olona “an-jatony” izy. Nichols nahitana angano momba an'i Hickock lava be tao amin'ny lahatsoratra navoakan'ny Harper ny vaovao Gazety isam-bolana izay nitarika ny lazan'ny Wild Bill. Na dia Hickok aza dia mpiasan'ny marika faran'izay tsara hatramin'ny fahazazany, ny biograpiera voalohany indrindra dia nanombatombana fa olona 6 na 7 fotsiny izy no maty tamin'ny basy.
Noho ny lazany dia nasaina handray anjara amin'ny fampisehoana mampiseho ny fiainana any amin'ny sisintany tandrefana i Hickok, feno miaraka amin'ny Indiana ary ny filaharana nitifitra. Ao anatin'io fahaiza-miasa io dia niasa tao anaty artista izy izay naneho ny fahaizany tamin'ny basy ihany koa nandritra ny seho.
Tamin'ny 1876, Wild Bill dia nilalao karatra tao amina saloon tany Deadwood, South Dakota rehefa voatifitra tao ambadika sy namonoana filokana iray. Hickok dia voalaza fa nitazona aces sy kiraro roa, izay nanjary fantatra amin'ny hoe "Tànan'ny olona maty", taratry ny famonoana an'i Hickok.
Wild Bill Hickok amin'ny maha lasa fiainana taloha an'i Matthew McConaughey
Matthew David McConaughey dia teraka tao 1969 tao Texas. Nandeha tany amin'ny University of Texas, Austin izy, ary nahazo mari-pahaizana tao amin'ny Radio-Television-Film. Lasa artista malaza izy ary nahazo Oscar tamin'ny andraikiny ho kintana rodeo izay mifehy ny SIDA amin'ny sarimihetsika Dallas Buyers Club.
Rehefa mipetraka any California dia lasa surferance ny McConaughey, fanatanjahan-tena mitaky reflex-maranitra, izay takiana ihany koa ho lasa mpamaky basy mahomby.
Fantatra amin'ny andian-teny hoe: "Tsy tsara, tsara izany." Efa be taona aho mahalala an'io fehezanteny io tamin'ny voalohany dia nampiasaina tao amin'ilay hira 30 Andro amin'ny Holey, nataon'i Humble Pie.
Interstellar Travel, UFO ary ET's: Alien Reincarnate too!
Matthew dia nanintona sarimihetsika maromaro momba ny fitsangatsanganana eny amin'ny sehatra, anisan'izany Laharana fandraisana na rohy (1997) ary Interstellar (2004). Ny mahaliana ahy dia miasa andian-dahatsoratra momba ny dia interstellar aho, UFO's sy ET's. Hita hoe efa reincarnate koa ny ET. Ireo lahatsoratra ireo dia hita ao amin'ny faritry ny tranokalanay mitondra lohateny:
Evolisiona fanahy, UFO's sy ET's.
Mijanona kely raha mahaliana ireo lohahevitra ireo. Araho izahay Facebook or Twitter, izay nambara lahatsoratra vaovao. Raha hijery ireo raharaha hafa mahakasika ireo mpisehatra, azafady, alaivo:
Sarimihetsika sy famerenana fahitalavitra indray
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Misy fitoviana tsy mitovitovy amin'i Wild Bill Hickok sy Matthew.
Ny filan'ny fiainana taloha, ny talenta ary fahaiza-manao: Nanjary olo-malaza i Wild Bill noho ny fanararaotana nataony ampahibemaso ary tamin'ny farany dia lasa mpilalao amin'ny fampisehoana izy ireo izay mikendry ny hamerina ny Wild West. Matthew McConaughey dia mpilalao ary olo-malaza malaza ao Oscar, izay fantatra amin'izao fotoana izao noho ny maha-tarehy an'i marika Lincoln fiara any Etazonia.
Hickok dia mpamono basy, izay mitaky refleks miavaka sy fandrindrana, izay takiana ihany koa fa ho surfer.